Dawlada Imaaraat-ka Carabta iyo Shirkada DP World oo kulan Qarsoodi ah Magaalada Dubai kula yeeshay Gudoomiyaha Xisbiga Wadani | Berberanews.com
Dawlada Imaaraat-ka Carabta iyo Shirkada DP World oo kulan Qarsoodi ah Magaalada Dubai kula yeeshay Gudoomiyaha Xisbiga Wadani
April 15, 2019 | Published by: admin
Dubai-(Berberanews)-Dawlada Imaaraatka Carabta iyo Shirkada Dp World ayaa kulan aan la shaacin kula yeeshay magaalada Dubai Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro).
kulankan oo ahaa qarsoodi ayaa la sheegay in aanay cidi ku wehelin Gudoomiye Cirro, waxanay labada dhinac yeesheen laba kulan oo mid waliba ahaa gooni. waxana la sheegay in uu la kulmay madaxda sare ee shirkada Dp World oo ay is arkeen saraakiisha ugu saraysa, lama sheegin waxa ay ka wada hadleen.
Gudooomiye Cirro ayaa sido kale la kulmay Suldaan Rashiid iyo Sh.Mansuur oo ah Madaxweynaha iyo Ra`iisal wasaarada dalka, waxana la sheegay in kulankaasi uuu qaatay saacado badan, ilaa hadana si cad looma sheegin waxa ay ka wada hadleen.
Gudoomiyaha Xisbiga Wadani ayaa la sheegay in uu si fiican ula dhacay soo dhawaynta loogu sameeyay magaalada Dubai, lamana garanayo ujeeda ka dambaysa socdaalka cirro iyo kulamada qarsoodiga ah ee ay wada yeesheen madaxda Imaaraatka.
ilo xogogaal ah ayaa shabakada wararka ee Berberanews u sheegay in dawlada imaaraatka carabtu sare u qaaday meeqaamka Gudoomiyaha Xisbiga Wadani loona sameeyay soo dhawayn sare oo aan hore loogu samayn jiray. sidoo kale shirkada Dp World ay danaynayso in ay wada shaqayn la yeelato Xisbiga Wadani.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Somaliland ayaa sheegay in mad madow soo kala dhex galay Dawlada Imaaraatka Carabta iyo Xukumada Muuse Biixi Cabdi. iyada oo aanu fiicnayn wada shaqaynta labada dhinac, taasina ay keentay in loo gacan haadiyo Gudoomiyaha Xisbiga Wadani.
ilahaasi waxay intaas ku dareen in sababta dawlada Imaaraatka Carabtu ugu yeedhay Gudoomiye Cirro, in ay tahay ka dib markii madaxweyne Muuse Biixi uu shirkada Dp World ku adkeeyay in ay dhaqan geliso qodobadii lagu heshiiyay isla markaana fuliso wixii dhinacooda ku xidhan ee mashaariic ah. Haseyeeshee ay taasi ku noqotay arrin aanay filayn sidaas daraadeedna ay dhoolatus siyaasadeed tahay marti-qaadka Xisbiga Waddani.